Caasimadda Puntland oo Amaankeeda iyo Bilcdeedabada Wax Laga Qabtey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Caasimadda Puntland oo Amaankeeda iyo Bilcdeedabada Wax Laga Qabtey
Maamulka Gobolka Nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyey hawlo dhanka amaanka lagu sugaayey iyo kuwo nadaafadeed oo maalmihii u danbeeyay ka socdey caasimadda Puntland.
Gudoomiyaha Gobolka Nugaal Mudane Cabdi Xirsi Cali oo Horseed Media la hadley ayaa sheegay, in ay ku mashquulsanaayeen muddooyinkii la soo dhaafey arimo la xiriira dhanka amaanka iyo kuwo dhanka nadaafadda.
Dheyaso: Waraysiga Gudoomiyaha Gobolka Nugaal Mudane Cabdi Xirsi Cali [powerpress]
Guddoomiyaha ayaa sheegay in dhanka nadaafadda ay qaadeen talaabo muhim ah taas oo ay isku waafaqeen Wasaaradda Waxbarashada iyo Maamulka Degmadda in maalinkasta oo kahmiis ah ay ardeydu ka qaybqaataan hawlaha nadaafadda, isla markaana la gubo dhamaan bacaha iyo waxyaabaha deegaanka aan u wanaagsanayn.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in la doonaayo in bulshaddu ay noqoto mid isku filan oo aan la sugin cid kale.
Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dhanka amaanka ay qaadeen talaabooyin muhim ah, waxa aan dhawaan isu keenay dhamaan nabadoonada iyo odoyaasha, waxa aan dagaal ku qaadney arimaha xaalufinta, waxaana socota wacyigelin, taas oo gobolka oo dhan ka socota, waxaana uu sheegay in aan la asaasi karin, xirmooyin daaqsin.
Dhanka hawgalada lagu beegsanaayo dadka amaandarada ka wada caasimadda Puntland ayuu sheegay guddoomiyuhu in ay taasi tahay mid taagan oo waqti kasta Boolisku ay soo qabtaan dadka amaan darada wada, waxaa ka mid ah hubka magaalada lala dhexmaraayo waa la qabtaa. Cabdi Xirsi ayaa sheegay in dhibaatooyinkii yar yaraa ee ciyaalka yar yar samayn jireen ay tahay mid soo afjarantey oo aan jirin hadda.
Mar la weydiiyey Guddoomiyaha in ay jiraan dad loo qab qabtey Burcadbadeednimo ayuu sheegay in ay jiraan dad arimahaas loo qabtey, waxaana loo dhaadhiciyey xabsiyada halka qaarkood ay sugayaan maxkamaddo.
Mudane Cabdi Xirsi ayaa qirey in ay jiraan dad xabsiyada ku jira kuwaas oo aan weli maxkamad la horgeyn, waxaana uu sheegay in dhawaan uu hay’adda garsoorka u qoray codsi ah, in dadka xabsiga ku jira ee aan sharciga la horgeyn deg deg loo horgeeyo, waxaana caddaatey dadka ku jira in ay yihiin kuwo aan kiiskoodu dhamaan.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa xili muddooyinkii danbe ay ka socotey caasimadda Puntland hawlo lagu sugaayo amaanka.